Ny hoavin'ny Cinnamon sy Linux Mint | Avy amin'ny Linux
Ny hoavin'ny Cinnamon sy Linux Mint
Cinnarch sy Manjaro Cinnamon Community Edition, izay samy miorina amin'ny Arch Linux ary miaraka amin'i Cinnamon ho tontolon'ny birao, dia nanambara herinandro vitsivitsy lasa izay fa nandao an'i Cinnamon izy ireo ka nivadika ho GNOME Shell.
Ny antony lehibe indrindra amin'ity fanovana ity dia ny tsy fahaizanao mitazona birao fampandrosoana ho miadana toy ny Kanelina amin'ny distros izay maharaka hatrany hatrany amin'ireo izay mifototra amin'ny Arch Linux.
Midika izany fa ny hany fizarana kanelina hampiasa dia ny Linux Mint, izay nanamboarana ity fork an'ny GNOME ity tamin'ny voalohany.
Noho io antony io dia vitsy ny manontany tena ny amin'ny hoavin'ny Cinnamon. Inona no hataon'ny Linux Mint? Inona no hataon'i Lefevbre, mpitarika anao?
Zavatra sarotra ho fantatra izany. Na izany aza, manaitra fa ny olana miaraka amin'ny Cinnarch sy ny Manjaro Cinnamon Edition dia nipoitra saika tamin'ny fotoana iray. Tsy tongatonga ho azy izany ary manana fanazavana tena tsotra: GNOME 3.8.
1 Ilay meloka lehibe: GNOME 3.8
2 Ny "maody mahazatra" ao amin'ny GNOME 3.8
3 Kanelina, ny Unity manaraka?
Ilay meloka lehibe: GNOME 3.8
Tsy afaka intsony ny kanelina ary tsy mifanaraka amin'ny GNOME 3.8. Ity kinova vaovao ity dia tsy mifanaraka amin'ny kinova taloha, izay tsy hampiasaina ny fonosana rehetra mampiasa tranomboky sy API avy amin'ny kinova taloha. Ity no tranga misy an'i Cinnamon, izay ao amin'ny kinovany ankehitriny 1.7 dia manohana hatrany amin'ny GNOME 3.6. Ity dia matotra manokana amin'ny fizarana "mandeha rà" toy ireo miorina amin'ny Arch Linux.
Tamin'ny fanambaràna ny fandaozana ny Manjaro Cinnamon Edition, hoy izy ireo tamin'ireto teny ireto: "Tsy afaka mitazona an'ity fanontana ity intsony izahay satria nandao an'i Cinnamon ny any ambony noho ny tsy fitovizany amin'ny GNOME 3.8".
Midika izany fa tena mety hanjavona ny kanelina satria manomboka mizatra ny GNOME 3.8 ny fizarana. Na izany na kanelina dia tsy maintsy hampifanaraka faran'izay haingana mba ho velona.
Na izany na tsy izany dia hitako fa tetikasa natokana ho lany tamingana ao anatin'ny fotoana fohy izany. Tsy dia noho ny olana mifanentana izay vao notantarainay, na koa satria nanova ny heviny i Clement Lefevbre ary lasa distro hafa amin'ny interface GNOME Shell ny Linux Mint ... ny tiana hambara dia ny antony maha-Cinnamon anao (ampidiro ny mpampiasa manana interface toa ny GNOME 2) dia tsy manan-kery intsony amin'ny GNOME 3.8.
Ny "maody mahazatra" ao amin'ny GNOME 3.8
Ny "maody mahazatra" vaovao dia noforonin'ireo mpampiasa izay tia tontolo iainana mahazatra (toy ny GNOME 2 na WIN XP) fa tsy mampiasa ny GNOME Shell Ankehitriny, naninona ireo mpandraharaha no nanapa-kevitra ny handao ny "mode fallback"? Noho ny antony telo:
Izy io dia ahitana modely zara raha voakarakara
Tsy nanolotra ny kalitao na ny traikefan'ny mpampiasa ny fahitany
Ny fikojakojana azy dia nampiadana ny fivoaran'ny evolisiona tamin'ny faritra hafa
Ny maody kilasika vaovao dia miasa amin'ny alàlan'ny fanitarana sy fanamboarana etsy sy eroa, saingy ny fotodrafitrasa ampiasaina dia mitovy ihany, noho izany ny fomba vaovao dia hankafy ny tombony rehetra entin'ny kinova GNOME ho avy.
Kanelina, ny Unity manaraka?
Noho ireo voalaza etsy ambony ireo, misy fanontaniana maromaro: Hanjavona ve ny kanelina sa ho lasa Shell Mint an'ny Linux Mint?
Amim-pahatsorana, ary misy resaka tsotra izao, aleoko tsy hanjavona. Toa tsy misy tena fepetra manamarina ny fisiany raha ny fahitako azy. Etsy ankilany, na dia nipoitra toy ny akorandriaka ho an'ny Linux Mint aza ny kanelina, dia nanjary tsikelikely no nampiasain'ny distro hafa ... na dia tao anatin'ny fotoana fohy aza dia nila nandao azy io izy ireo, araka ny efa hitantsika. Raha ao an-tsaina io dia mampalahelo tokoa ny mahita ny Kanelina lasa lasa akorany Linux Mint, tsy dia noho ny antony fampifanarahana fonosana sy ny sisa (izay farany, azonao atao hatrany ny manandrana manamboatra) fa kosa ho an'ny resaka marketing na fitsipika. , te-hanavaka ny tenany amin'ireo distro hafa ary tsy ho iray amin'ireo antokony.
Mino aho fa ny làlana tokony harahan'ny Linux Mint dia ny mifindra mankany amin'ny GNOME 3.8 ary asehoy ilay mpampiasa amin'ny GNOME amin'ny maody mahazatra amin'ny alàlan'ny default. Heveriko fa maro no hanaiky an'io hevitra io. Saingy, azo antoka, izany no hevitro manetry tena. Tsy misy zavatra hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ny hoavin'ny Cinnamon sy Linux Mint
Ernesto Manriquez Mendoza dia hoy izy:
Tahaka ilay mpampivelatra GNOME-Terminal izay nangatahana hamerina endri-javatra nesorina tamin'ny GNOME izay ampiasain'ny dog-dog + (terminal mangarahara) ...
Tsia (ary akomboko ny bibikely ary manarona ny sofiko aho ary mihira lalalalalalalalala)
Valiny tamin'i Ernesto Manriquez Mendoza
Anuxi Rod dia hoy izy:
Aleoko ny Kanelina fa tsy Gnome 3.x amin'ny Linux Mint, ny marina ... Hitako fa mora kokoa sy mora ampiasaina izy io.
Mamaly an'i Anuxi Varilla
danielcb dia hoy izy:
1.- Tsy marina ireo, satria tsy niresaka momba ny fahombiazany na tsia aho taloha, ny fitarainana momba an'i Canonical ihany no nolazaiko fa tsy ny KDE sy Gnome (averiko fa mora ny mahita fa meloka)
2.- Ilay iray hafa, tsy miresaka momba ny Gnome na tsia aho amin'ny fanaparitahana ireo tranomboky AZY, miresaka momba ireo izay mitaraina aho fa "tsy mieritreritra ny zanany" i Gnome (toa an'i Kanelina, ary raha mamaky ilay lahatsoratra ianao marina, Gnome izay lazainao fa napetrak'izy ireo ho fiandohan'ny olana fa tsy mivoatra amin'ny fomba tsara kokoa ny tetik'asa Lefevbre), izay ny zavatra tsy dia lehibe indrindra, ary koa mametraka ohatra hafa momba ireo vondrona miasa izay tsy manana ny zavatra hatao raha misy olona te-hanorina amin'ny zavatra nataony. Ampy izay ny zon'izy ireo mandray an-kalalahana ny asan'i Debian, Amarok, Gnome (na ilay rindrambaiko tianao horesahina amiko), ka mbola mitaraina izy ireo fa izy ireo no tompon'antoka amin'ny fivoarana azo avy amin'ireo Tsy asa tsara.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha manao bilaogy aho ary mamoaka ny volavolako, dia tonga ny iray hafa ary te hametraka azy io ary satria tsy afaka manao izany araka ny itiavany azy izy ireo, izaho ve no meloka? pfff. Ary toy izany koa amin'ny gadona, misy olona tonga ka tsy afaka manarona azy, ny mpanoratra voalohany ve no meloka? ha, mazava ho azy.
Mamaly an'i danielcb
an_trsE5HX dia hoy izy:
tsy maintsy mihatsara ny kanelina satria manome fomba fijery hafa amin'ny linux mint izy ary ny distros hafa dia tsy tokony hijanona hisafidy, araka ny voatanisa amin'ny arch linux mint dia tokony handinika ny fandavana azy ka manomboka misy fanavaozana matetika kokoa. Tiako ny kanelina miaraka amin'ny lokony mainty sy ny endriny malaza ary koa maivana.
Valio ny an_trsE5HX
Eduardo Campos dia hoy izy:
Ny firaisankina dia azo apetraka ao amin'ny Archlinux, tsy miankina amin'ny Ubuntu irery ihany, raha toa ka maimaim-poana ny kaody, sarotra ny mampiasa azy amin'ny distro manokana.
Valiny tamin'i Eduardo Campos
Fran jsj dia hoy izy:
Eny, azo apetraka izy io, saingy maloto ny fametrahana azy, ao anatin'ireo bibikely sy zavatra mety tsy maintsy amboarinao tanana.
Mamaly an'i Fran jsj
Dah65 dia hoy izy:
Ny zavatra lazainao dia misy lesoka maromaro:
- Mikasika ny Xorg / Wayland / Mir: nisy ny marimaritra iraisana fa efa lany andro sy mavesatra i Xorg, ary 3 taona lasa izay no hany safidy tokana amin'ny fampandrosoana dia Wayland. Ity tetik'asa ity dia notohanan'ny distros sy ny tontolon'ny birao (KDE / GNOME), izay mampiditra azy tsikelikely.
Ary volana vitsivitsy lasa izay Canonical, izay nampanantena ny hanohana sy hampifanaraka an'i Wayland, dia nanambara fa niasa miafina nanomboka ny volana Jolay 2012 tao amin'ny MIR, safidy iray hafa ho an'i Xorg.
Ny nolazain'i KDE / GNOME dia ny hanohizan'izy ireo ny làlan'ny fampifanarahana amin'ny Wayland, izay efa nandaniany fotoana sy ezaka. Noho izany, na dia mety misy fahatezerana amin'ny Canonical / Ubuntu sy ny MIR aza, "miala" amin'i Wayland dia tsy inona fa ny manohy ny làlana natomboka.
- Ny zavatra itsikerana ny GNOME dia ny APIs dia tapaka eo anelanelan'ny kinova fa tsy mitady fifanarahana aoriana. Noho izany, raha manitatra ho an'ny GNOME 3.4 ianao dia mila mamerina azy io ho an'ny GNOME 3.6 ary indray ho an'ny GNOME 3.8.
Talohan'izay, ary toe-javatra iray niainako tany Debian, nanana programa vitsivitsy tao amin'ny GNOMe 2.30 aho ary ny hafa tao amin'ny GNOME 2.32, ary niasa avokoa izy rehetra. Tsy misy izany izao.
Ka ampahany ny an'ny GNOME. Zavatra hafa iray hafa, izay tsy ifandahako mihitsy, ny GNOME dia mandray ny fivoarany araka izay hitany fa mety. Saingy ny zava-misy fa miaraka amin'ny sampana 3.x isaky ny mamoaka fanakanana mifanentana amin'ny dikan-teny dia zava-misy tsy azo lavina
Mamaly an'i Dah65
Ary inona no andrasan'ny mpanamboatra Cinnamon hanao fork feno amin'ity birao ity, ny MATE amin'izao fotoana izao dia nanaraka ny làlany manokana (lojika satria tsy voatazona intsony ny GNOME 2) ary namorona fork fampiharana manokana ho an'ny birao, tranomboky sns ... raha te hanohy misy ny kanelina dia tokony hieritreritra ny hamorona traikefa tokana ho an'ny mpampiasa fa tsy hifanaraka amin'ny GNOME 3.x
neyson daniel dia hoy izy:
kanelina dia tsy tokony hanjavona ary raha misy ny antony misy.
Mazava ho azy fa tsy mampiasa kanelina aho satria aleoko ny fomba fitantanana ny fikandrana ny akorandriaka sy ny kde ao amin'ny kinova farany izay araky ny fantatrareo rehetra dia ny mamindra ny cursor amin'ny zoro hitantanana ny windows. rehefa masinina taloha dia aleoko ny vady na ny lxde arakaraka ny taonany, eny fa na ny fluxbox amin'ny solosaiko 32-bit taloha misy ondrilahy 500 MB. izao I CINNAMON dia ilaina ho an'ireo izay avy amin'ny windows 7; taloha ny zavatra akaiky indrindra ny interface windows 7 dia ny kde fa satria nanova tanteraka ny fomba fitantanana windows io, ny zavatra tsara indrindra ho an'ireto mpampiasa ireto dia ny kanelina satria tsy manintona azy ireo loatra ny vady.
Heveriko fa ny kanelina dia tokony hahaleo tena amin'ny akorandriaka mamerina ny anarana hoe iray manontolo fa tsy ampahany amin'ny fonosana fotsiny, heveriko fa izany no mora indrindra. Heveriko fa raha mbola tsy vita dia satria ny mpamorona linux mint dia te hihazona rafitra nohavaozina mba tsy hanana fonosana miverimberina izay manana kanelina kanelina sy gnome amin'ny solosain'izy ireo fa tokony ho tsapantsika ihany koa fa ny tsy misy intsony ny habakabaka. olana amin'ny solosaina ankehitriny io, ary tsy mila mandray an-tanana ireo solosaina taloha ianao izay tsy tokony hametraka kanelina fotsiny satria efa nolazaiko teo aloha fa mate sy lxde io. mahafaly
Mamaly an'i neyson daniel
Eny, eny, fa ny zavatra mora indrindra dia ny mahita meloka fa tsy manaiky ny andraikiny tsirairay.
"Damn Ubuntu manary an'i xorg ary mamorona MIR, inona no hitranga amin'i xorg?, Mamorona fisarahana fotsiny i Ubuntu"
Avy hatrany dia nanambara i Gnome sy i KDE fa handeha hiaraka amin'i Wayland izy ireo, ary hahafoy tanteraka an'i xorg… .fa tsy nisy nilaza na inona na inona.
"Ny Gnome dia tsy manampy an'i Kanelina hifanaraka"
Ary ny zava-misy dia tsy i Debian, Arch, Slackware, Amarok (na ilay programa distro-n'ny ray aman-dreny voalaza), no nanolo-tena hanohana ireo "zanany vavy" ... fa tsy misy milaza na inona na inona. Ary eto ny zavatra tena mahaliana indrindra dia na tsy any Ubuntu na any Mint dia mimenomenona izy ireo, mandeha amin'ny diany manokana izy ireo na miala amin'ny tranomboky toy ny ataon'ny Ubuntu amin'ny Unity, izy ireo no tsy ao anatin'ny vondrona fampandrosoana / mpampiasa azy akory. manao fimonomonona izy ireo. Ao amin'ny tanànako dia antsoin'izy ireo hoe "mitono hena."
honovan dia hoy izy:
Jereo, hitako amin'ny fomba fijery maromaro, ny an'ny mandroso: ary mahasosotra ny miantehitra amin'ny fampiharana novolavolain'ny antoko fahatelo, izany no nahatonga ilay tetikasa kanelina sy ubuntu.
Nisaraka tamin'ny debian i ubuntu noho izany antony izany satria io no nolazain'izy ireo ary tondroiko izao fa azoko tsara ary ny tsirairay dia nanakiana an'i ubuntu ary izao ny ubuntu dia iray amin'ireo fizarana tsara indrindra ho an'ireo olona vao manomboka fa tsy tokony hisy izany linux sarotra izany, izay tonga tamin'ny fanaovana Ubuntu , linux mint namaha ampahany tamin'ny sasany ny olan'ny ubuntu amin'ireo mpamily kilasy voalohany mora kokoa sns sns sns.
Heveriko fa tsara ny cinamon, tena tsara ary tiako ny efa nanangona izay rehetra vaovao amin'ny gnome 3 sy ny firaisana amin'ny gnome 2.
Ankehitriny dia tiako ilay hevitra fa ny cinamon dia natokana ho an'ny linux mint ary koa ny firaisankina ho an'ny kanonika izay tiako holazaina aminao dia ny orinasam-pampandrosoana tsirairay dia nanamboatra sy namorona sy namorona fampiharana mifanaraka amin'ny hetahetany sy ny hetahetany, ny sasany tena tsara ary ny hafa ratsy kokoa noho ny ny hafa fa izay rehetra nahazoantsika tombony tamin'izy ireo, hoy aho tamin'ny mpampiasa fa nampiasa derivatives debian aho.
Heveriko fa olana lehibe ho an'ireo orinasa fampandrosoana linux izany, na inona na inona fanarahana ny fitsipiky ny tetikasa antoko fahatelo izay reraky ny farany (ubuntu-debian) ary te hanana ny azy manokana, koa ny kanelina dia manondro ny ho avy X. xx Miaraka amin'ny fisehoana sy ny fampiasa vaovao gnome 2 ary ho an'ny kanelina dia nihatsara izy ary tiako izany.
izay nampiasako 2 taona nisesy nefa tsy nisy olana kely.
Mamaly an'i honovan
Sylvia Sanchez dia hoy izy:
Raha manjavona ny kanelina, dia mijanona miaraka amin'ny KDE na Mate aho. Gnome 3.8 dia mpivezivezy ary VELONA. Tena tsara lavitra ny kanelina, tsy ilaina ny manana fiaramanidina hampiasana azy. Tsy toa an'i Gnome 3 fa raha tsy ilay solosaina super dia efa mila miaritra faharetana ianao ...
Valiny tamin'i Sylvia Sánchez
Miguel Mayol dia hoy izy:
Rehefa avy nanandrana ny Mate sy ny kanelina aho nandritra ny fotoana kelikely dia nifindra tany amin'ny XFCE aho ary nahafaly ahy hatrizay
Valiny tamin'i Miguel Mayol
Misy vahaolana hafa hafindra ao amin'ny birao Solus OS Consort, na dia eo am-pivoarana aza izy io
iCao dia hoy izy:
Miarahaba ny rehetra, tsy ekeko ny milaza fa manjavona ny kanelina, heveriko fa resaka tsiro izany, tsy hoe satria tsy tiako ny gnome 3.8 manambara ny fiafarany.
Izaho manokana dia nampiasa mint linux mint foana ary ny MATE sy ny kanelina dia tena nahomby.
Araka ny nolazaiko, resaka tsiro ary raha ny fizarana tokana dia tsy ratsy izany, ny mifanohitra amin'izany dia miavaka ary mamporisika ny fanatsarana, ny fahamendrehana ary ny fitoniana.
Mamaly an'i iCao
Guest dia hoy izy:
Raha ny nolazaiko dia resaka tsiro ary satria ny fizarana tokana dia tsy ratsy izany, ny mifanohitra amin'izany dia miavaka ary manizingizina ny fanatsarana, ny fahamendrehana ary ny fitoniana. dia handrisika
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho =)
Jorge Tinitana Gavilanes dia hoy izy:
Ary inona no hitranga amin'ny MATE avy amin'ny Linux Mint?
Valiny tamin'i Jorge Tinitana Gavilanes
Hitohy izy io, aza manahy, toy ny kanelina ihany. Tsy haiko hoe maninona no be ny tsaho mieritreritra, vakio tsara kokoa ny bilaogy linux mint. Amiko manokana dia tena tsara ary araka ny nolazain'i Lefevbre, ny linux mint toy ny kanelina dia tsy miraharaha izay ataon'ny ubuntu.
Mihobia !!! =) aza manahy fa mbola eo anilanao ny mint linux.
Gustavo Castro dia hoy izy:
Ny milaza fa ny GNOME no "meloka" amin'ny zava-mitranga dia tsy rariny mihitsy. Inona moa fa kanelina no mandray ny toerana voalohany.
Valiny tamin'i Gustavo Castro
Mitohy any Manjaro ny kanelina ary hamoaka famoahana vaovao izy ireo, efa nataon'ny vahoakan'i Arch fa mifanaraka amin'ny Gnome 3.8
Tsara! Tsy fantatro ... misaotra amin'ny vaovao.
Ahoana ny fiaviany distro na misy fotsiny hametrahana ny fonosana? Ilay teo aloha no tiako horesahina.
Alfredo Gomez dia hoy izy:
Nivoaka ny kanelina 1.8…. ary miahiahy aho fa hanjavona izy, na dia ny Mint aza no nampiasa azy, dia hanamarina ny fisiany, koa ... bandy SL ireo, tsy azo hamakafaka amin'ny fomba fijerin'ny paradigma lozisialy manana.
Valiny tamin'i Alfredo Gómez
Izy io dia ao amin'ny Fedora ihany koa, openSUSE ary vao hitako fa ao amin'ny Debian ihany koa 😀
Aleoko ny kanelina mihoatra ny Gnome 3.X, tena ...
shamaru dia hoy izy:
Ilay namana mitovy ihany, nanandrana ny boaty misokatra aho (tiako be dia be izy io ary namboarina fa tsy tiako ny interface tsara kokoa), gnome-shell (ao amin'ny kinova farany izay nahatsapako ho tena ratsy satria ny tontolo iainana no safidiko voalohany, tsy ampy izany kely dia kely ny fanaingoana ary misy zavatra fototra tsy hita, ankoatry ny fandaniana loharano bebe kokoa, amin'ny farany ratsy), ankoatry ny hafa ary tsapako fa tsara kokoa noho ny fanaingoana lehibe azy, ny fahaizany mamy, tena sariaka sns.
Mamaly an'i shamaru
Misy zavatra tsy voalaza, ny tombotsoan'ny Gnome hitazomana ny fifanarahana aoriana amin'ireo fonosana taloha. Heveriko fa misy koa ny loharanon'ny hadalana rehetra nolazain'i Miguel de Icaza ...
Mamaly an'i Lupo
Daniel Coca dia hoy izy:
Tsy mandray anjara firy amin'ny tetikasa intsony i Miguel de Icaza, tadidio fa natokana ho an'i Xamarin fotsiny izy izao, ary ny gnome 3.8 dia manana safidy betsaka noho ny 3.6.
Kanelina dia efa tsy nanandrana azy hatry ny ela aho fa raha ny fahitako azy dia nihatsara be ary tiako fa misy "tsiro" birao bebe kokoa.
Niala dingana roa i Gnome mba handrosoana efatra.
Valiny tamin'i Daniel Coca
JohanR dia hoy izy:
Manaiky aho fa manjavona ny kanelina satria efa nanandrana aho ary saika mitovy amin'ny Unity miadana be.
Ekeko fa Gnome 3.8 no ampiasain'izy ireo saingy iray amin'ireto fiasa manaraka ireto:
1. Manana ny fomba Gnome 2 mahazatra
2 Ho haingana kokoa ary hohajaina toy ny KDE ary ampidiro ny fametrahana ny lohahevitra emeraoda amin'ny toerana misy anao
Mamaly an'i JohanR
yashirasu dia hoy izy:
Mampiasa akorandriaka Gnome aho tamin'ny voalohany, natahotra ny handalo ahy aho ... firaisankina io saingy nieritreritra aho androany fa tsy hanova azy na amin'inona na amin'inona, hiteny aminao fa ny 3.6 dia mandany loharano mitovy amin'ilay 3.4 miaraka amina endri-javatra maro kokoa
Mamaly an'i yashirasu
Solidrugs Pacheco dia hoy izy:
Tokony ho azoko tsara amin'ny asany izay tsy nanarahako azy hatramin'ny nanombohany hatramin'ny nanomezany azy fotoana fohy ary tsy tiako izany ka novaiko, fa amin'izao fotoana izao dia apetrako ary hitako I fa raha ny Unity dia mino aho fa tsy hanitsaka an'io gorodona io mihitsy aho, tsy tiako izany, fa G Shell dia homeko fotoana hafa izany, efa mahita ny hoavin'ny kanelina 😛 tsara ny mizatra amin'ny safidy hafa koa, dia hivoaka ny Linux Mint 15 raha hijery ny fomba, arahaba sy fisaorana, zahao akorandriaka gnome
Navalin'i Solidrugs Pacheco
Io no tontolo iainako tiako indrindra, ary raha mampiasa Linux Mint aho dia noho ny kanelina 🙁 Heveriko fa mitovy, tsy maintsy ampifanarahana izy io na natao hanjavona: /, fa… etsy andaniny gnome 3.8 raha ny tena izy dia misy fiovana marina tokoa kinova maro? miaraka amin'ny kinova bebe kokoa hatrany ary maro kokoa ny fangatahana avy amin'ireo masinina izay manitra toy ny marketing, raha ny fijeriko mazava ho azy. Manantena aho fa hivoatra amin'ny sakana amin'ny fenitra linux: / izay hafahafa no efa voamarina. MISAOTRA
PS: rahoviana aho no handefa ny sariko amin'ny birao amin'ny Mey 😛
AlbertoAru dia hoy izy:
Mampiasa fallback gnome mandritra ny taona maro aho - mandeha amin'ny fotony
Manao kanelina mandritra ny roa volana aho - mandeha amin'ny fotony
Hanomboka hampiasa varavarankely $ aho, hahitako raha mitovy ny vintana ...
Mamaly an'i AlbertoAru
Salama, nandalo fotsiny aho ary te hamela hevitra! Te hilaza aminao aho fa efa mpampiasa ny programa GTK + saika hatramin'ny andiany 1 an'ny Gnome ary na dia nosedraina imbetsaka aza ny KDE, tsy dia naharesy lahatra ahy loatra izany satria hitako fa be loatra izany, nefa tiako ny teknolojia misy eo ambaniny (Qt eo amin'izy ireo)!
Amin'izao fotoana izao, niaraka tamin'ny fisehoan'ny latabatra maro dia maro aho, nahafaly ahy ny nanandrana azy rehetra:
- KDE 4.8 (SolydK) amin'ny PC birao misy RAM iray i3 sy 3GB. Tiako ny teknolojia misy azy sy ny mety hisian'ny fikirakirana saingy tsy tiako ilay lohahevitra misy anao. Fa ny olana lehibe indrindra manjo ahy dia ny fanjifana fitadidiana, manana tabilao misokatra ao amin'ny Firefox na Chromium aho ary tonga ny fotoana hanombohany manao Swap ary lasa tsy tantanana. Ho vahaolana dia nametraka LXDE aho izay ampiasaiko rehefa te-hijery Internet aho.
Iray amin'ireo programa tiako ny momba ny KDE dia Okular, heveriko fa mahafinaritra!
-Cinnamon: Nampiasako izany tamin'ny LMDE ary hitako fa mahafinaritra izany saingy tsy tiako ny fotoana maharitra hanokafana ny menio. Heveriko fa izany no lesoka lehibe indrindra nananany!
-Gnome 3: Tena tsara koa! Ny nanakana ahy tsy hampiasa azy io dia ny laniny rehefa misy varavarankely misokatra maro, Firefox misy tabila maro ary VirtualBox mihazakazaka amin'ny Windows XP. Tokony ho izy koa dia manomboka manao Swap. Ho ahy ny lesoka lehibe indrindra dia ny tsy fitoviana amin'ireo fanitarana ao amin'ireo kinova vaovao.
-XFCE4: Tetikasa nahasarika ny saiko hatrizay fa tsy maharesy lahatra ahy ny hampiasako azy isan'andro, dia toy izany koa ny mahazo ahy amin'ny KDE.
-LXDE: Toa tsara be amiko ihany koa fa ny fihinana fahatsiarovana dia tsy lavitra an'i Mate amin'ny LMDE Mate Edition.
-Mate: Io no ampiasako izao, ilay fork taloha an'ny malalako Gnome 2. Tiako ny hafainganam-pandehany ary manao toy izany koa izy nefa tsy mandany loharano toa an'i Gnome 3. Tonga aho nanapa-kevitra ny hampiasa fampiharana Gtk + 2 noho ny fahampiany ambany amin'ny loharano ary satria Firefox / Chromium / LibreOffice dia heveriko fa mbola mampiasa an'io tranomboky io ihany izy ireo.
-CrunchBang! Saika hametraka an'ity Debian minimalista ity miaraka amin'ny LMDE Mate Edition aho, hahitako raha afaka mifanaraka amin'izany aho. Satria ny programa ampiasaiko dia tsy mila birao manokana (VirtualBox, Freeplane, LibreOffice, Geany, Evince) ary ny sasany noana ara-pitaovana, mila RAM betsaka araka izay azo atao ho azy ireo aho.
Eny, rehefa avy niresaka momba ny zavatra niainako mpampiasa aho dia te hanome anao ny hevitro momba ny kanelina! Aza atsipazo amin'ny tsatokazo aho azafady !!!
Izany no ilazako azy satria novakiako fa mandany ny fotoanany hanovana ny API i Gnome sy Gtk ary manakana azy ireo tsy hanao lohahevitra hafa ankoatry ny soso-kevitr'izy ireo.
David grajales cardenas dia hoy izy:
kanelina> gnome 3.x foana
Mamaly an'i David grajales cardenas
muhlber dia hoy izy:
Toa ahy iray amin'ireo Desktops tsara indrindra efa nanandrana aho. Hitako fa milamina sy mailaka i Kanelina raha ampitahaina amin'ny GNOME 3.x. Ary tsy azoko hoe maninona ianao no tena tapa-kevitra fa manjavona. Raha misy zavatra nianarako tamin'ny rindrambaiko maimaimpoana dia misy zavatra tadiavinao amin'ny tsiro rehetra. Izaho, sy ireo mpampiasa maro hafa toa ity birao ity. Ny tsy tianao fotsiny dia tsy midika hoe tokony hiala izy.
Mamaly an'i muhlber
Efa novakianao ve ny momba ny SolusOS sy ny manodidina azy antsoina hoe Consort desktop ?? heverina fa mifototra amin'ny tsy fahombiazan'ny gnome io, fork a!
Nisavoritaka tamin'ny fanehoan-kevitra aho, afaka mamafa izany ve ny olona sasany? Misaotra anao!
Salama efa lany daty ity, ovao izany sa hampifangaro olona ianao. Ny kanelina dia mbola ao Manjaro ary efa nohavaozina ho amin'ny andiany 1.8.
Mbola mieritreritra ihany ve ianao anio fa tsy manana ho avy ny kanelina? Sa ny mifanohitra amin'izay no izy?
Johnny dia hoy izy:
Kanelina, marina sy marim-pototra, TSY tokony hanjavona izy io satria RAHA misy ny tena fepetra manamarina ny fisiany. Indrindra raha nanapa-kevitra ny hametraka linux amin'ny solosaina findainy aho dia noho ny Linux Mint sy kanelina.
Valiny tamin'i Johnny
Ny lahatsoratra bilaogy dia efa somary antitra ihany, saingy faly aho nahita fa nandritra ny taona maro, dia tsy tanteraka ny faminanianao, fa io kanelina io dia lasa iray amin'ireo DE ary be mpampiasa indrindra ankehitriny.
Efa ela aho no nampiasa kanelina teo aloha; Tsy voatery ho mpampiasa Mint ianao (distro be eo an-dàlana) handehanany tsara ny kanelina
Salama, avy amin'ny ho avy aho ary mbola manana fanitarana perrugueras i Gnome Shell. Azo antoka satria vitsy no te hanelingelina ny famoronana iray ka rehefa manavao izy ireo dia tsy mitombina intsony.
Zavatra roa ihany no mila hialako amin'ny kanelina (misy fanitarana roa afaka manao an'io fa tsy miaraka):
-Lisitry ny varavarankely misokatra (tsy fisokafana fampiharana), toy ny nisy hatrizay, tsy misy banga mitete.
-Ny takelaka ambany (mba hikasika ny valindrihana fanaraha-maso ireo vakizoro fitetezana).
Oswaldo rivera dia hoy izy:
Ratsy loatra fa ny fandraisana anjara izay nataon'i Kanelina dia voatsabo amin'ny fomba ambonin'izany. Ny miteny hoe "Interface mitovy amin'ny Gnome 2 na WIN XP" dia tsy tokony hahalala Cinnamon amin'ny halaliny, fa tsy hanome lanja ny mety aminy mihoatra ny fanandramana ny fanavahana ny Gnome 3.X, izay toa tsy dia mieritreritra loatra momba ny mpampiasa, fa momba ny "fanavaozana" isaky ny.
Mamaly an'i Oswaldo Rivera
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 13.04 Raring Ringtail
Boky toro-lalana Debian azo alaina amin'ny Espaniôla